I-8 intshi ebanzi yokuhambisa igumbi lokuhlambela
Ikhaya / Ukuhlamba igumbi lokuhlambela / Ukuphathwa kabini kwigumbi lokuhlambela lokuhlambela / WOWOWU 8 ungene. I-2-Handle Bathroom Faucet kwi-Chrome
ikaliwe 5.00 Kwi-5 esekelwe kuyo 22 amanqaku umthengi
(22 ncomo ngumthengi)
Khetha igumbi lokucoca ishawari ebanzi ebanzi 2320300C ilungele usetyenziso lwakho, kwaye isebenzise okona kulungileyo; oyikhethayo ihlala igqibelele. Siya kuthi, njengamaxesha onke, sigcine umgangatho olungileyo kunye nenkonzo elungileyo yokubuyisela abathengi, kwaye ndijonge phambili ekwabelaneni ngakumbi nani! Ukusuka ekukhetheni izixhobo ukuya kwimodeli ukuya kusetyenzwa, sisebenze nzima ukukunika umgangatho ongcono.
2320300C imiyalelo yokufaka
Isikhenkcisi esiphakamileyo segumbi lokuhlambela eline-7 ekhethekileyo, ngokuqinisekileyo linika ukuchukumisa okhethekileyo nakweyiphi na igumbi lokuhlambela. Abaqulunqi beWOWOW baziwa ngokubanzi ukuba basoloko bekhangela uyilo olunesibindi ukuze benze umahluko ngegumbi lokuhlambela lakhe. Ngenxa yoko, izihluzi zegumbi lokuhlambela zeWOWOW zihlala zahluke kancinane kwezinye izikhitshana zegumbi lokuhlambela oya kuzifumana. Oko kukunceda ukuba unikeze igumbi lokuhlambela elikhethekileyo kunye nelikhethekileyo. Eli nqaku likhethekileyo uya kulifumana kwigumbi lokuhlambela itawuli chrome 2 eziphathwayo zeWOWOW. Ngokuqinisekileyo le faucet yegumbi lokuhlambela iya kunika amandla ophuculo olukhulu kwigumbi lokuhlambela.
Isitya sokuhlambela sesilivere kunye neziphatho ezi-2 zibonelela ngokugqitywa kwekrisimesi. Oku kubizwa ngokuba yinto engento yanto kuyonwabisa kakhulu kwaye kufanelekile ngakumbi kulo naliphi na igumbi lokuhlambela langoku. Le faucet yegumbi lokuhlambela le-chrome yayikhanyiselwe kancinci ukuba inike ukubamba okubonakalayo kule faipet yegumbi lokuhlambela chrome ezi-2. Ngokuqhelekileyo indawo ecwebezelayo ye-chrome incitshisiwe nje kancinane ukuze ibonakale ngokukhethekileyo. Njengoko ubona, WOWOW ujonge iindlela ezahlukeneyo zokwenza igumbi lakho lokuhlambela likhetheke kwaye lahlukileyo.
Izibonelelo zegumbi lokuhlambela itawuli chrome 2 isingatha ngokufanelekileyo:
I-SKU: 2320300C iindidi: Ukuhlamba igumbi lokuhlambela, Ukuphathwa kabini kwigumbi lokuhlambela lokuhlambela tags: Umgangatho waseMelika, bamba banzi, Izibambo ze-lever
Khange ndilindele ukuba itompu itshiphu kangako xa ithelekiswa nomgangatho wayo. Iphantse yafana nale bendiyifuna evenkileni kodwa ayibizi kangako. Kulula kakhulu ukuyifaka, icocekile kwaye uyile kakuhle. Ndiyithanda kakhulu ukuba ihamba kakuhle nakuphi na uyilo lwangasese kunye nesinki. Umgangatho ophezulu kakhulu. Yomelele kwaye iguquguqukayo kwaye ibonakala yomelele kakhulu. Amabala ayinyani ebusweni bompompo kodwa nokuba ibiyinto elula ecocekileyo. Okokugqibela kodwa ngoku kuncinci, intloko yebhobho iyajikeleza i-360 degree, efanelekileyo kakhulu xa ndihlamba ubuso okanye ukuxubha. Ngokwenene yenziwe yalula.
Le faucet ilungile, ikhangeleka intle kakhulu Ukupakisha kulumke kakhulu, icandelo ngalinye lineebhegi zalo ezizimeleyo ezingalukanga itepu ayibizi, kodwa umntu ophetheyo uyabiza kakhulu. Ndiqeshe umntu ophetheyo kwaye kwamthatha iiyure ezingama-2.5 ukufakela itephu yam entsha. Ngenxa yokuba itepu endala irusi, kunzima ukuyisusa, kodwa kufanelekile.
itompu enesisindo. Kulula kakhulu ukuyifaka kwaye ungatsho ukuba yinto esemgangathweni enye. ndiyathemba ukuba ihlala ixesha elide
Lindela inkosi ukuba ifake! Izinto ezisemgangathweni. Ubume kunye nombala zilungele kakhulu igumbi lam lokuhlambela!
Intsimbi esemgangathweni enexabiso elifanelekileyo lokuthetha ndiyayithanda imibala ephethe iikhowudi kuyo yonke into ebonakala ngathi yenziwe kumgangatho ophezulu ukukhutshwa komdiza okuthe tyaba kuyabiza ngexabiso eliphantsi kodwa akukho mntu unokuyibona xa sele uyifakile ikhangeleka intle. Uthande uyilo uthande intloko enkulu yompompo enegumbi elongezelelekileyo lokufumana izandla zakho phaya kwaye ukwazi ukuhlamba ubuso bakho ECT. Iza nayo yonke into oyifunayo ngaphandle kwezixhobo zokuyifaka. Mthande ukuguquka kweedigri ezingama-360. Ndiyikhethile enye ngenxa yoyilo ibukeka intle kakhulu yisitayile sam. Ndiyavuya ikhangeleka intle emntwini njengoko isenza emfanekisweni kwaye yeyona ndawo ifikelelekayo.
oku yayikukutshintsha ipompo endayifaka kwiminyaka engama-40 eyadlulayo eyayiqala ukuvuza. Ukuqhubela phambili kwexesha kuyamangalisa. O-amakhonkco endaweni yokusebenzisa i-plumbers putty ungathethi ngokunyuka. Oku kwakulula kakhulu kunompompo ngaphambili. Ijongeka kwaye isebenza kakuhle. Ndicebisa kakhulu.
Ngokwenyani siluthengile olu lungiselelo lwesitandi sethu esitsha sodwa ibhafu ngenxa yokuba sifuna indawo ende. Kuye kwafuneka sithenge iplagi yedreyini eyahlukileyo esaziyo ukuba siza kuyenza kuba oku kwenzelwe ngakumbi isinki yokuhlambela. Ukulungiswa kodwa kujongeka kukuhle kwibhafu. Ndonwabe kakhulu ngayo!
Itephu entle ekhangeleka intle. Sifake nje kwaye khange sibe nangxaki ngayo ukuza kuthi ga ngoku. Tshatisa ezinye izixhobo zangasese. Faucet Ukusasazeka ukunika yangasese inkangeleko entle, iinkwenkwezi ezintlanu.
Kufanelekile yonke ipeni enye !!! Isinki yam ikhangeleka intle kwaye kulula ukuyifaka. Ndincoma kakhulu. Ijongeka ngathi itephu entle kakhulu.
Xa uthenga uhlobo olukhethiweyo olukhethiweyo, ukuthanda ukuthanda ukuchukumisa akusayi kushiya iminwe. Ukufumana kwam iimpahla, ndafumanisa ukuba ndenze ukhetho olufanelekileyo. Kwakubonakala kukumgangatho ophezulu kwaye kunzima ukusibamba ngesandla sam.
Itephu efanelekileyo. Umgangatho ophezulu. Yomelele. Ukugqiba okuhle. Ipakishwe kakuhle. Ndisebenzise bendizokuntywila encinci. Thanda ukuba iyajikeleza.
Le yenye yetephu entle yegumbi lokuhlambela, kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo itephu yam yokuhlambela yayiqhekeke ngokupheleleyo, ke beka nje le faucet intsha kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, kwaye isebenza kakuhle nayo yenza igumbi lam lokuhlambela likhangeleke ngakumbi ngombala, ndiyayithanda, kwaye Usapho lwam lonke luyayithanda!
Ke andinakukwazi ukusebenzisa ipompo ayingqinelani nezixhobo zam zangoku. Ndacinga ukuba ibinomtsalane kwaye ilungile. U-Plumber uthe ngekhe abe nangxaki yokufaka ke ndicinga ukufakwa ngokulula. Kuyaphoxeka ukuba ayingqinelani inokuba yayijongeka intle!
Andikholelwa ukuba ndiyicwangcise ndedwa kwaye ndithatha kuphela imizuzu engama-30. Eli lixesha lam lokuqala ukufaka itephu ethetha ukuba kulula kakhulu ukuyifaka. Ijongeka intle kwaye inesitayile kwigumbi lokuhlambela lam.
Le tephu kulula ngokwenene ukuyifaka. Mna nomyeni wam asinamava ngokufaka itompu, kodwa sizenzele ngokwethu ngokulandela imiyalelo. Inenkangeleko entle ngaphezulu kwecomputer yam yemarble. Umgangatho olungileyo !!! Ulunge ngakumbi kunento endinayo ngaphambili.
Kudala ndikhangela ujongo olwahlukileyo kwigumbi lam lokuhlambela eliphambili ukubonisa. Umgangatho omkhulu kunye nokuqina kwexabiso. Ngokuqinisekileyo ungacebisa ukuba uhlahlo-lwabiwo mali kwaye ujonge umboniso omnandi.
Le faucet ibonakala intle! Inemigca ecocekileyo. U-Plumber wayengenangxaki xa ufaka.
Xa umfana wam eqala ukujonga onke la malungu, wacaphuka wathi "pex" ngokungathi ligama elingcolileyo. Ngexesha agqibe ngalo ukufaka le faucet, wayecula iindumiso zakhe nabani na oyile le, kwaye ebuza ukuba kutheni zonke izinto zokulungisa imibhobho yamanzi zingalunganga. Ndonwabile ukuba ndikhethe le faucet. Ngaphandle kokulula, ndicinga ukuba intle.
Uhlobo endandilukhangela kwaye itepu ibonakala intle kwaye isebenza kakuhle. Kufike ngononophelo olupakishwe ngoncedo olusisiseko kunye nezalathiso. Kwakufuneka ndifakelwe umbhobho wemibhobho yamanzi ngenxa yokuba iinxalenye zombhobho wamanzi omdala zazingazukushukuma kwaye ekugqibeleni iivaluva ezivaliweyo zazifuna ukutshintshwa, ngenxa yoko ndiyavuya kuba yayilixabiso elihle kakhulu.
Impompo eyoyikekayo yemali. Iza kunye nokufakwa kokucinezelwa okungu-3/8, okwenza kube lula ukuziqhelanisa noninzi lokufaka.
Ngaba ineempawu zetephu ephindwe kabini kwixabiso.
Sinefuthe elitsha lokuhlambela elingafakwanga nompompo, ndakhangela uninzi ndaza ndalisebenzisa elimnyama ukuze ndilisebenzise apho elifumana inani elifanelekileyo lokusetyenziswa, kulula kakhulu ukutyhala / ukutsala. Kulula ukulandela iphepha liza nebhokisi, yomelele, ikhazimle, ijongeka, ngaphandle koko kulula ukufaka itephu kwaye ijongeka intle ngaphezulu kweencopho zethu zokubala.